“Raha mino ianao hoe nisy namorona izao rehetra izao, dia mety hoeritreretin’ny olona hoe vendrana, na hoe manaiky befahatany ny zavatra nampianarin’ny ray aman-dreninao, na voasasan’ny fivavahana ny atidohanao.”—Jeanette.
“Hozy ny mpampianatra anay hoe ny olona kamo hieritreritra, hono, no mino hoe nisy namorona ny zava-drehetra. Tsy vitany, hono, ny manazava hoe ahoana no nampisy an’izao rehetra izao.”—Maria.
Fehiny: Tsy hoe lasa manohitra ny siansa akory ianao raha mino hoe nisy namorona ny zava-drehetra. Vao mainka aza ianao hino hoe nisy namorona izao rehetra izao arakaraka ny ianaranao momba ny zavaboary.—Romanina 1:20.
“Be dia be ny olona miteny hoe angano fotsiny ilay tantara ao amin’ny Genesisy, dia mampihomehy an-dry zareo izay mino hoe nisy namorona izao rehetra izao.”—Jasmine.
Mety tsara ny toerana misy ny tany, ary azo iainana tsara eto.—Jereo ny pejy 4-10.
Hita eo amin’ny zavaboary hoe mahay ilay nanao azy.—Jereo ny pejy 11-17.
Mifanaraka amin’ny zavatra hitan’ny mpahay siansa ny tantara momba ny famoronana ao amin’ny Genesisy.—Jereo ny pejy 24-28.
“Ny tena naharesy lahatra ahy indrindra hoe misy Andriamanitra, dia ny zavaboary. Eo, ohatra, ny biby eto an-tany, fa eo koa ny zavatra eny amin’ny lanitra, izay hita hoe milamina tsara.”—Thomas.
“Nianaranay tamin’ny siansa hoe be pitsipitsiny ny zavamaniry sy ny biby ary ny vatan’olombelona. Tena gaga be aho. Tena resy lahatra aho hoe nisy namorona izy ireny. Izay mino ny evolisiona no ‘minomino foana’ fa tsy izay mino hoe nisy namorona izao rehetra izao.”—Hannah.
“Tiako be ilay hoe ‘Nisy Namorona Ve?’ ao amin’ny gazety ‘Mifohaza!’ Hitako avy amin’ilay izy fa diso ny evolisiona. Zavaboary tsara tarehy be toy ny lolo sy ny kôlibria ve dia ho nisy ho azy fotsiny teo?”—Talia.